क्याफेमा जागिर नपाएका ज्याक अलिबाबाकाे सँस्थापक बनेर कसरी धनि भए? यस्तो छ उनकाे सूत्र! जान्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > क्याफेमा जागिर नपाएका ज्याक अलिबाबाकाे सँस्थापक बनेर कसरी धनि भए? यस्तो छ उनकाे सूत्र! जान्नुहाेस्
admin April 20, 2020 जीवनशैली, बिजनेस	0
अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चियरम्यान ‘ज्याक मा’ कुनै समय एसियाकै धनाढ्य व्यक्तिमा गनिन्थे । उनले ‘वाण्डा ग्रुपका रुवाङ्ग जियानलिनलाई पछि पार्दै धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका थिए ।
ब्लूमबर्गको इण्डेक्स अनुसार ज्याकको सम्पत्ति २३ बिलियन डलर पुगेको छ । जब चीनमा पहिलो पटक केएफसी आएको थियो तब २४ जनाले नोकरीको लागि आवेदन दिएका थिए । जसमा २३ जना छनोट भए । एक जना फालिए, त्यो फालिने व्यक्ति नै थिए– ज्याक मा ।
उनको संघर्ष यत्तिमै सीमित रहेन । एक पटक आर्मीमा भर्ति हुन गए । पाँच जनामध्ये चार जना छनोट भए । उनी त्यहाँ पनि फालिए । कलेज पढन् गए, दशभन्दा बढी पटक आवेदन दिए, तर प्रत्येक पटक उनीलाई अस्वीकृत गरिएको बताइन्छ ।
अन्ततः उनले लगनले उनी २३ विलिएन डलरसहित एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने । उनको सफलताको पछि के छ त त्यस्तो सूत्र ? यहाँ हामीले उनका जीवनपयोगी केही भनाइहरु प्रस्तुत गरेका छौं जसले तपाईंलाई पनि सफलताको शिखरमा पुग्न मद्दत गर्नेछ ।
सफलताका लागि धैर्यता निकै जरुरी छ । जिन्दगी निकै छोटो छ, र निकै सुन्दर पनि । कामप्रति धेरै गम्भीर नहुनुस\_ र जिन्दगीको मज्जा लिनुस् । संसारमा पैसाको कुनै कमी छैन । कमी छ त केवल सपना देख्ने मानिसहरुको । वस्तुको मूल्यमा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा नगर्नुस् । प्रतिस्पर्धा गर्नुस् त केवल सेवा र सिर्जनशीलतामा ।
जब तपाईंले प्रयास नै गर्नु भएको छैन भने तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कुनै अवसर छ कि छैन भन्ने कुरा म जो हुँ उही रहन्छु । तब मलाई खुसी र सफलता मिल्छ । त्यसैले आफू जो हो उही बन्ने प्रयास गर्नुस्, न कि कसैको कपिक्याट । तपाईंलाई संगतका लागि इमान्दार व्यक्ति चाहिएको छ, न कि सबैभन्दा इमान्दार ।
कहिल्यै हार नमान्नुस् । आज कठिन छ । भोलि अझै कठिन हुनेछ । तर, नआत्तिनुस् पर्सी अवश्य दिन आउनेछ । यदि तपाईंले हार मान्नु भएन भने तपाईंको अघि अर्को एउटा मौका हुनेछ । हार मान्नु नै असफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । जहाँ गुनासो हुन्छ, त्यहीँ मौका पनि हुन्छ ।
यसरी लागेको रहेछ पसलमा आगो जसले लियो १३ बर्षिय समिरकाे ज्यान, खुल्यो रहस्य!
यस्तो पनि नेपालमै, श्रीमानको मृ’त्यु हुँदा श्रीमतिले पाइन् एक करोड !
ऋषि कपुरको अन्तिम भिडियो: अस्पतालको बेडमा डाक्टरले उनैको गीत गाउँदा यसरी रोएका थिए (भिडियो)